America Yogadzirira Kutumira Vaongorori veSarudzo
Chivabvu 15, 2018
Amai Jennifer Savage.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti gadziriro dzeAmerica dzekuzongorora sarudzo dzemuZimbabwe dzave pachidanho chepamusorosoro.
America inoti chikwata chayo chekutanga chatove muZimbabwe chakamirira chikwata chihombe chevaongorori vesarudzo vachazenge vari muZimbabwe vachiongorora sarudzo.
Vachitaura mushure memusangano wavaita nemutauriri weNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda muHarare, mumwe mushandi mukuru pamuzinda uyu, Amai Jennifer Savage, vati vanofara nezviri kuitwa mukuvandudza mutemo wesarudzo.
Asi Amai Savage varamba kutaura pamusoro pekuti vemapato havasi kufara nebhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo vachiti vachazopa pfungwa dzavo kana richinge rapasa muparamende.
Bhiri iri, iro rakapasa muNational Assembly svondo rapfuura, ratanga neChipiri kuzeiwa mudare reseneti.
Amai Savage vati vari kunzwa zvakawanda pamusoro pesarudzo dzegore rino uye tariro yavo ndeyekuti hurumende ichaita zvese zvairi kuvimbisa kuti sarudzo dzinge dzakachena.
Amai Savage vati musangano wavo naVaMudenda wange wakanangana nekuvandudza kudyidzana kweZimbabwe neAmerica.
Vati America icharamba ichibatsira Zimbabwe mune zvakasiyana siyana uye pari zvino ichangobva mukupa rubatsiro rwemamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora pasi pechirongwa chemutungamiriri wenyika iyi chekurwisana neHIV/AIDS, chePresident’s Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR.
Zimbabwe iri kuita sarudzo gore rino kekutanga vaimbove mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, vabva pachigaro uye mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnanangagwa vari kuvimbisa sarudzo dzakajeka.
VaMnangagwa vanotiwo vese vanoda kuongorora sarudzo idzi vakasununguka kuita izvi uye hurumende yavo yakatokoka nyika makumi mana neshanu nemasangano gumi nemashanu pasi rese kuti vazoongorore sarudzo idzi.